रेखा थापाको क्रेज बढ्दो… जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
रेखा थापाको क्रेज बढ्दो…
नायीका रेखा थापालाई कुनै परिचयको आवश्यक्ता पर्दैन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको उनको नामै काफि छ चलचित्रको सफलताको लागि। यसअघि यस्तै ब्राण्ड राजेश हमालको थियो। चर्चा परिचर्चाको केन्द्र तीनै हमाल हुन्थे। पढाइमा अब्बल र अभिनयमा सबल भनेर उनको खूब प्रशंसा हुन्थ्यो। उक्त प्रशंसा जायज पनि थियो। हमालमा प्रतिभाको कुनै कमि थिएन। पछिल्लो समयमा बद्लिदो रोजाई र उमेरले पनि हमालमा बिस्तारै ओजेल पर्दैछन् ।
तर नायीका रेखा थापाको क्रेज भने बढ्दो छ। कुनै बेला हमालले लिएको स्थानमा रेखा थापालाई देख्न सकिन्छ। मिडिया कवरेज, सोसिएल मिडियामा उपस्थित र चलचित्र जगतमा उनको दबदबाले यसको पुष्टी गर्दछन्।
पछिल्लो समयमा लोकप्रियता जाँच्ने एउटा कसि बनेको छ सोसियल मिडिया। सोसियलमा मिडियामा पनि सबै भन्दा बढि चल्तिको फेसबुकमा हेरे नायीका रेखा थापाको लोकप्रियताको ग्राफ पत्ता लाग्छ। फेसबुकमा रहेको उनको आधिकारिक पेजमा मात्रै १४ लाख ३३ हजार भन्दा बढिले लाइक गरेका छन्। उनका नाममा खोलिएका अनगिन्ति पेजमा पनि लाखौ लाईक छन्।
राजनीतिकरुपमा सचेत मानिने रेखा थापाको पोस्टहरु चलचित्रका कुरा, सामसामयिक भोगाई, र तस्विरहरु हुने गरेका छन्। उनीपछी फेसबुकमा बाबुराम भट्टराई सबै भन्दा बढि लाइक पाउनेमा पर्दछन्।
अन्य नायीकासंगको तुलना
नेपाली चलचित्र उद्योगमा नाम कमाएका अन्य नायीकाहरु मध्ये कसैले पनि रेखा थापा जतिको चर्चा र कवरेज पाएनन। करिश्मा मानन्धर, गौरी मल्ल, निरुता सिंह, बिपना थापासम्मले रेखा जतिको स्टारडम इन्जोय गर्ने पाएनन्।
सन २००० मा ‘हिरो’ चलचित्रमा यात्रा शुरु गरेकी थापा त्यसयता नायक केन्द्रित नेपाली चलचित्र उद्योगमा आफूलाई ‘हिरो’ सावित गर्न लगातार सक्षम रहँदै आएकी छिन्। चलचित्रमा उनलाई हेर्नैकै लागि पनि दर्शकहरु हलसम्म पुग्ने गरेका छन्।फेसबुकमा लाईकै कुरा गर्दा पनि दोस्रो बढि फ्यान भएकी नायीका नम्रता श्रेष्ठको पेजमा ३ लाख ५६ हजार लाइक छ भने सुष्मा कार्की र प्रियंका कार्कीको क्रमश ३ लाख ४४ हजार र १ लाख ६९ हजार छ जो उनी भन्दै धेरै कम हो।
कुन कुराले बनाउँछ रेखालाई यति चर्चित ?
चलचित्रमा उपस्थितिका अलावामा रेखा थापा राजनैतिक र सामाजिक रुपमा निकै सक्रिय छिन्। कुनैताका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसंग नाचेर तरंग पैदा गरिएकी उनी आजकल राजनीतिकरुपमा त्यति सक्रिय त छैनन तर सामजिक सक्रियता झन बढेको छ। बेला मौकामा उनका विषयमा हुने विवादले पनि उनको चर्चा घट्न पटक्कै दिएको छैन्। प्रचण्डसंगको सम्वन्ध, छविलाल ओझासंगको ब्रेकअफ देखि सुदर्शन गौतमसम्म आईपुग्दा कुनै न कुनै रुपले उनी विवादमा जोडिएकी छिन।
रेखाको विशेषता ग्ल्यामरबाट पछि नहट्ने र गाउँले पात्रका रुपमा पर्दामा छाउने सक्ने हो। उनी चलचित्रका जगतमा कुरामात्रै बोल्दिन। राजनैतिक विषयमा समेत धक फुकाएर बोल्न सक्छिन्। आफ्नै निजि जिन्दगीका बारेमा पनि उनले लुकाएको केहि छैन्।